I-HWID Spoofer 🥇 engafumanekiyo ekutshintsheni i-HWID kwimidlalo ekwi-Intanethi- Gamepron
Nokuba isithintelo se-ID yesixhobo sehardware singanqanda abasebenzisi beMidlaloPron ukuba bangangeni kwimidlalo yabo abayithandayo, njengoko konke ekufuneka ukwenzile kukusebenzisa enye yeHWID Spoofers yethu. Ngelixa abanye abadlali bezokucingisisa ngobomi emva kokuvalwa kwesazisi sehardware, ungaphumla! Sisoloko sinokhetho lwe-ID entsha yentsimbi kubo bonke abasebenzisi bethu apha kwiGamePron.
Ngaba sele ufumene ukufikelela kwi-HWID Spoofer? Fumana ezinye zeenkwenkwezi zokukhohlisa oza kusebenza nazo apha!
Nceda uqaphele: Ngaphambi kokuba uthenge i-HWID Spoofer yethu, qiniseka ukuba isixhobo osikhangelayo ukuba usithenge sihlaziyiwe kutshanje okanye sisekwi-intanethi. Ngelixa sihlala sihlaziya izixhobo zethu, kukho ukulibaziseka ngexesha lokuhambisa kwezinye iimeko; Ngelixa ihlala ikhawuleza, inokuthatha iiyure ezimbalwa. Zonke izixhobo zethu zitshixiwe nge-HWID, oko kuthetha ukuba ungazisebenzisa kwikhompyuter enye-qiniseka ukuba ikhompyuter yakho iyahambelana nazo zonke izixhobo zethu kwangaphambi koko. Akukho mbuyiselo iya kunikwa wakube UKUJONGE isitshixo semveliso!
Khetha i-HWID Spoofer elungileyo ehambelana neemfuno zakho zokukhangela njengeglavu
Umdlalo weplanethi Spoofer
Konke oku kuthatha amanyathelo amathathu alula okusebenza ngendlela yakho ejikeleze isithintelo se-ID yesixhobo sehardware!
Ukuphepha ukuvalwa kwe-HWID akuzange kube lula enkosi kwiqela elitsha kwi-GamePron
Khetha ukuba yeyiphi imidlalo ongathanda ukuyithenga enye yeeHWID Spoofers zethu, amathuba okuba sinento oyifunayo iphezulu kakhulu.
Khetha i-HWID Spoofer efanelekileyo kakhulu
Kukho iiyantlukwano ezahlukeneyo zeHWID Spoofer ezikhoyo apha kwiGamePron, zonke ezo ziya kubonelela ngezibonelelo ezahlukeneyo.
Yenza intlawulo yakho usebenzisa iindlela zethu zokuhlawula ezikhuselekileyo
Sisebenza sisebenzisa iprosesa yentlawulo ekhuselekileyo ngokupheleleyo ukuqinisekisa ukuba ulwazi lobuqu lwabathengi bethu alunabungozi.
Kutheni ndisebenzisa iSpoofer yeHWID kwiGamePron?
Abanye abagcini baya kucinga ukuba ukuvinjelwa kwesazisi sehardware kuya kuphelisa ulawulo lwabo ngonaphakade ngaphandle kokuba bazimisele ukuthenga ikhompyuter eyahlukileyo. Ukuvalwa kwesazisi seHardware kuyingozi ngohlobo lokuba awuzukuvunyelwa, ekuphela kwendlela onokuthi usebenze nayo kukuba "ungazenzisi izinto". Le yinkqubo uninzi lwabakhohlisi oluqheleneyo nayo, nangona abo bengekhoyo kwindawo efanelekileyo! Ikhompyuter yakho iya kuba ne-ID yehardware enikwa izinto ezithile ngaphakathi, ezinje ngamakhadi akho emizobo kunye nezinto zolo hlobo-xa enye yazo iphawulwe ngesibhengezo sehardware, ikhompyuter yakho ayinakho ukufikelela kumdlalo rhoqo.
Lo ngumba wezizathu ezicacileyo kuba oku kuya kuthintela abasebenzisi ekudlaleni imidlalo abayihlawuleleyo. Ewe kunjalo, ukophula i-TOS (Imigaqo yeNkonzo) kuhlala kusebenza xa kusenziwa uhlazo, ukusebenzisa i-HWID Spoofer yethu kuyakuvumela ukuba ukhohlise ngaphandle kononophelo emhlabeni! Nokuba ungagqibela ukuvalwa ungavula i-HWID Spoofer yethu kwaye ucofe inkqubo yakho usebenzisa enye yee-ID zethu. Abaphathi beserver kunye neenkqubo ezizenzekelayo zokufumanisa ukukopela (njengeBattlEye okanye iVanguard) ziya zisomelela ngokuhamba kwexesha, kodwa ngekhe zikwazi ukuvala zonke ii-ID zakho.
Ukuba nenkululeko yokwenza nantoni na oyithandayo kwimidlalo oyithandayo kuyakhanyisa, ukutsho nje okuncinci. Uye uqaphela ukuba kusenokwenzeka ukuba kukho iitoni zabanye abasebenzisi zokukopela, kwaye bebesoloko besenza eli xesha liphela; Ufumene imemo kancinci emva kwexesha konke! Ngoku ukuba ufumene i-GamePron ungaziqhekeza de intliziyo yakho ibe nomxholo, njengokusebenzisa i-HWID Spoofer iya kuthintela nakuphi na ukuvalwa okungalindelekanga ekupheliseni ixesha lakho elilungileyo. I-Anti-Cheat elula, i-COD Anti-Cheat, kunye nezinye iinkonzo ziya kuxhaswa ngokuzenzekelayo xa usebenza ne-GamePron, uqinisekisa ukhuseleko lwakho ngelixa udlala nawuphi na umdlalo ozisebenzisayo.
Inkqubo ye-spoof iya kuhlala isebenza de kube iiwindows zakho ziqala kwakhona.
I-OS exhaswayo: Windows 10 (konke kuyakhiwa)
I-CPU exhaswayo: Intel & AMD
I-GPU exhaswayo: I-Nvidia kunye ne-AMD
Ukhuseleko: IHwid itshixiwe
I-Anti-cheats ezixhaswayo: I-Battleye, i-Easy Anti Cheat, i-COD Anti cheat, iVanguard.
HWID Spoofer Imidlalo exhaswayo
Ifuna iReformat kunye ne-BIOS MODE: UEFI, ayizukusebenza kwilifa
I-COD Imfazwe yangoku kunye neWarzone
COD Imfazwe ebandayo
Izinto ezimbalwa zokwazi malunga ne-HWID Spoofer yethu
Besisoloko sibeka ukubeka amandla ngqo ezandleni zabasebenzisi bethu apha kwi-GamePron, kwaye i-HWID Spoofer izokubonisa ukuba sithetha ntoni ngaloo nto. Awusekho ukuba ujongane neziphumo ozinikwe ziinkqubo ezizenzekelayo zokulwa ukukopela, kwaye kutheni kufanele ukuba ubenjalo? Uwuhlawulele umdlalo kwaye kufanelekile ukuwudlala nangona ungathanda, nokuba oko kuthetha ukwazisa ii-hacks ezimbalwa kumxube (onokuzifumana apha kwi-GamePron, ngendlela!).
Izinto ezizodwa zekhompyuter yakho zinikwa inombolo eyingqayizivele xa zenziwe, kwaye lelo linani lothotho abaphethe kulo lonke “ubomi” babo. Nanini na xa ikhompyuter yakho ibethwa ngesibhengezo sehardware enokubonakala ngathi sisiphelo sehlabathi, njengoko olo lolunye uhlobo lokuvalwa olungaze lubhukuqeke.
Sinokukunceda ekupheliseni ukuvalwa kwesazisi sehardware ngokungxama inkqubo yakho kunye nokwazisa ii-ID ezicocekileyo zehardware ukukunceda ukudlula kwinto oyenzileyo kwixa elidlulileyo, kodwa kukho iimeko ezithile apho kulandelwa inani lokuvalwa elishiyekileyo. Akunakuze kube njalo ngeGamePron (xa ujongana nemidlalo yeBattlEye kunye neVanguard), njengoko iza nenkqubo yococeko ekhethekileyo esetyenziselwa ukuchonga nokucoca iifayile zokulandelela.
Isebenza njani iHWID Spoofer?
I-HWID Spoofer yethu kunye noKhuphiswano
Yintoni i-HWID Ban?
Ungayidlula njani i-HWID Ban
Sebenzisa i-ID yespofer yesixhobo se-Hardware kulula, nangona abanye ababoneleli ngeempahla benokungaziniki ngokwabo. Le yinkonzo ifunyenwe ngokukodwa apha kwiGamePron, kwaye siyinikela kuba kuthintelwa ekudlaleni imidlalo oyithandayo kukunyelisa emehlweni ethu. Ungathembela kuthi ukuba sikugcine umlo, nokuba kukho abantu (okanye iinkqubo) phaya phandle abazama ukukubamba! Ukwakha isixhobo esitsha sokudlala sokudlala kuya kukudla amawakawaka eedola, kwaye ukuzama ukufumana isiqwenga sehardware esivalwe kwikhompyuter yakho akunakulunga; unokwenza nje i-ID entsha yezixhobo zekhompyutha usebenzisa i-GamePron kwaye ube kwindlela yakho eyonwabileyo!
Nje ukuba ufumane ukufikelela kwinkonzo ye-HWID Spoofer, ungasebenzisa enye ye-ID yezixhobo zehardware eveliswe sithi ukonakalisa inkqubo yakho. Xa uzama ukunxibelelana neseva yawo nawuphi na umdlalo onikiweyo, abayi kuqaphela ukuba udlala kwikhompyuter evaliweyo! Endaweni yoko, konke abaza kukubona kukuba une-ID yehardware ecocekileyo esebenzayo, kwaye ilungile kubo. Abanye ababoneleli benkohliso banikezela ngenkonzo ethembekileyo yokuqhafaza, kodwa akukho mntu unokuyiphatha le nkqubo njengeGamePron.
Mhlawumbi uyazibuza ukuba yintoni umahluko phakathi kweGamePron nabo bonke abo sikhuphisana nabo, kwaye impendulo ilungile phambi kwakho! Isizathu sokuba bonke abasebenzisi bethu baqhubeke nokubala kwi-GamePron kwiimfuno zabo ze-HWID spoofing kukuba sinika iziphumo, kwaye sikwenza oko ngaphandle kwentambo. Akukho ntlawulo ifihliweyo kwaye ngekhe sibeke umda kubasebenzisi bethu xa kufikwa kwiimpawu ezikhoyo kwi-HWID Spoofer, ke yintoni enye onokuyenza? Into yokuba sibonelela ngeentlobo ezimbini ezahlukeneyo zobulungu (rhoqo kunye ne-VIP) ibonisa ukuba ubhetyebhetye buphezulu kuluhlu lwethu, kwaye oko kuyasomeleza njengabaphumeleleyo xa kuthelekiswa nabo sikhuphisana nabo. Unokufumana iinkonzo ze-HWID zokuphamba kwenye indawo, kodwa azizukuqinisekisa ukhuseleko lweakhawunti yakho (leyo sizimisele ukuyenza apha).
Ngaba uzenzele inceba kwaye uyilahle umbono wokuzama ezinye izinto zeHWID, akukho sizathu sokujonga kwenye indawo wakube utyelele i-GamePron. Abanye banokuthi le nto iza ngokuzikhukhumalisa, kodwa siyazithemba kwiinkonzo zethu-eyona ndlela yokufumana uvakalelo malunga ne-HWID spoofer yethu kungokuzama ukukhusela i-HWID yakho.
Ukuvalwa kwesazisi seHardware kuyadlula xa umlawuli (okanye kwiimeko ezininzi, inkonzo yokufumanisa ubukhohlisayo) ebona ukuba uyakopela, kwaye unike isohlwayo esiqatha. Abanye abantu bayakubethwa ngesibhengezo okwethutyana okanye isilumkiso ngamanye amaxesha, kodwa akunjalo xa unikwa isibhengezo se-HWID. Oku kuthintela okunxulumene nee-ID ezizodwa ezinxulunyaniswa nezixhobo zekhompyuter kwikhompyuter yakho, ngokuchaseneyo nento efana ne "IP Ban", enokuthintela kuphela unxibelelwano lwakho lwe-Intanethi. Ukujongana nokuvalwa kwesazisi sehardware akunakwenzeka ngaphandle kwenkqubo yokuphamba ngaphandle kokuba uzimisele ukwakha ikhomputha entsha kraca ngazo zonke izinto ezintsha. Abanye abantu balungile kule nto ukuba bazakuyinyusa, kodwa khawufane ucinge ukuba ingakanani imali onokuyichitha uyenze ngalo lonke ixesha!
Gcina ixesha elininzi kunye nemali ngokuzibandakanya kwinkqubo ye-HWID yokuphamba! Nayiphi na iakhawunti oyenzayo kwikhompyuter ene-ID yehardware evaliweyo iya kuvalwa ngokwakho phantse kwangoko, ke oko kwenza ukuba uzame ukudlala umdlalo njengoko ubuqhele ukwenza.
Ukudlula kwisibhengezo se-HWID kunokuba ngumsebenzi onzima ukuba ufuna ukuhamba enye indlela, kodwa ukuthembela kwi-GamePron nakwi-HWID Spoofer yethu kuya kuba lula. Abanye abantu bazama ukuchonga ukuba yeyiphi i-ID kwinkqubo yabo evaliweyo kwaye bajongane nayo ngokufanelekileyo, kodwa leyo yinkqubo echitha ixesha kuphela ingcali ngalo mbandela eya kuba nakho ukuyiphatha. Endaweni yoko unokusebenzisa uluhlu lwee-ID zehardware ezifumaneka ngokuzenzekelayo kwiHWID Spoofer yethu! Uhlala ufikelela kwi-ID yehardware ethembekileyo xa usebenza neGamePron, okuyimfuneko xa ufuna ukuqhekeza ngokuzithemba. Abasebenzisi akusafuneki ukuba balayishe iihacks zabo ngexhala lesibhengezo sehardware, njengoko unokwenza nje indlela yakho edlulileyo emva kwangoko.
Inkqubo ye-HWID Spoofer yenza ukhetho kunye nokusetyenziswa kwe-ID entsha yehardware isebenze ngakumbi kunokhuphiswano lwethu, ke konke okuya kufuna ukugqitha kwisibhengezo se-HWID kunokufumaneka apha.
IHwid Spoofers imibuzo
Khetha kukhetho lwethu olubanzi lwe-HWID Spoofers ukuze ugqibelele iindlela zakho zokugenca
Kutheni ndingayisebenzisa i-HWID Spoofer yakho?
Ukungavunyelwa kwesazisi seHardware ngesiqhelo sisigwebo sentambo kubagculeli, kuba akukho mntu uza kuzakha iikhompyuter zabo emhlabeni ukuya kuthintela enye. Iindaba ezimnandi zezokuba akusafuneki ukuba ucinge ngokwakha isixhobo somdlalo esitsha, njengoko i-GamePron inokukunceda ugqithe ukuvalwa kweHWID ngaphandle
kobunzima kakhulu. Awuzukukwazi kuphela ukunqanda ukuvalwa kwangaphambili usebenzisa i-HWID Spoofer yethu, kodwa nakuphi na okunye ukuthintela okuza kubakho kuhambo lwakho lokugenca kungaphathwa nako! Sisoloko sinebhetshi entsha yee-ID zehardware zabasebenzisi beMidlaloPron ukuba baxhamle kuyo, kwaye sihlala siwahlaziya ukuze aqinisekise owona mgangatho ubalaseleyo.
Endaweni yokuchitha imali yakho uzama ukutshintshela iziqwenga zehardware, unokuba lilungu leMidlaloPron kwaye uphathe zonke izithintelo ze-HWID ngaloo ndlela. Kulula kakhulu kunayo nayiphi na enye indlela ephaya, ngokuqinisekileyo!
Zingaphi ii-ID zehardware ekufuneka uzinike?
Inani le-ID yezixhobo zehardware ezikhoyo kwi-GamePron liza kwahluka, kodwa kuya kufuneka uyazi ukuba baya kuba baninzi ngaphandle kwayo. Ngelixa sisenokuba nokuninzi esinokukhetha kuko ngamanye amaxesha, akufani nokuba uyakuhlupheka ngenxa yokunqongophala kokukhetha kunye neMidlaloPron. Sinamakhulu (ukuba ayingamawaka) ee-ID zehardware oza kuzisebenzisela ukuphamba kwakho, kwaye luluhlu oluhlala lukhula, njengoko uzisebenzisa. Abanye ababoneleli bale nkonzo bahlala bebonelela ngenani eliqingqiweyo lee-IDs zekhompyutha kubasebenzisi babo, kwaye ngamanye amaxesha ezinokubangela ukugqagqana; Le yeyona ndlela ilula yokuvalwa.
Thintela iingxaki eziza ne-spoofer yesazisi se-hardware eshiyekileyo kwaye ujoyine i-GamePron namhlanje! Ukufikelela ngokungenamda kweyona nkonzo yeHWID Spoofing ibalaseleyo kwi-Intanethi kwaye ungaze ujonge ngasemva.
Ibiza kubiza malini i-HWID Spoofer yakho?
Xa kuthelekiswa nezinye ii-HWID Spoofers, kuyacaca ukuba i-GamePron ibonelela ngenkonzo yethu ngexabiso elifikelelekayo. Ukuba ubuzimisele ukwakha ikhomputha entsha kraca ukunqanda ukuvalwa komsebenzi, kuya kuba sengqiqweni ukutyala imali yakho encinci ngokufumana ukufikelela kwiHWID Spoofer yethu! Nangona singazithatha njengenkonzo yeprimiyamu ebeka umgangatho womsebenzi wethu kwindawo yokuqala, sisafuna ukugcina ixabiso lamaxabiso afikelelekayo. Esi sesinye isizathu sokuba abasebenzisi bakulungele ukubhalisela i-GamePron, njengoko singabeki bantu ngamaxabiso angenangqondo.
Kuhlala kungcono ukutyala imali ngokwakho njengesigebenga, ngokuchaseneyo nomatshini owusebenzisayo. Yenza ngokwakho kwaye ufumane ukufikelela kwinkonzo yethu ye-HWID Spoofing namhlanje.
Kutheni okhuphisana nabo bengalunganga?
Olu khuphiswano luhlala luqinile xa kuziwa kushishino lokugenca, yiyo loo nto iGamePron ingaze ikhuphe into engakhange ihlangane nemigangatho yethu. Nge-HWID Spoofing, kuya kufuneka wenze umsebenzi ogqibeleleyo xa kufikwa kwinkqubo yophuhliso, kwaye lowo ngumahluko omkhulu phakathi kwe-HWID Spoofer kunye nabanye. Abanye ababoneleli babethe nje isixhobo sabo kunye, ngokunokwenzeka badibanise ii-ID zehardware ezivela kumthombo wesibini (onokuthi ukhokelele kubasebenzisi abaninzi abazama ukunxibelelana ne-ID efanayo yehardware, ebangela ingxwabangxwaba kwinkqubo). Xa umntu efuna ukufumana inkqubo egudileyo yokuqhekeza ngokuphepha isibhengezo sehardware, i-GamePron kuphela kwesisombululo esisebenzayo.
Okhuphisana nathi abanakho ukugcina inani le-ID yehardware efumaneka kwiGamePron, kwaye ngokuqinisekileyo abanakulinganisa inqanaba lethu lenkxaso yabathengi; Kungenxa yoko le nto bengalunganga!
Ngaba kufanelekile ukuba nditshintshe ikhompyuter yam?
Uninzi lwabantu ababethwe ngesibhengezo sehardware ye-Hardware banokubhenela ekugqibezeleni ukutshintsha iirig zokudlala abazisebenzisayo, ezinokuba yingxaki kwezinye iimeko. Ewe kunjalo, abanye abantu baya kuphucula kunjalo, kodwa olo hlobo lokoyisa injongo-awunyanzelekanga ukuba uyilahle ikhompyuter ngenxa yokuba ubukhe waba sisazisi sehardware kumdlalo owuthandayo! Endaweni yoko, ungabhalisela inkonzo yethu ye-HWID Spoofing kwaye uza kudlala ngathi akukho nto yenzekileyo kwasekuqaleni. Ngelixa unokufuna ukuqaphela ukusebenzisa iakhawunti entsha, oko akuthethi ukuba kuyakufuneka ubeke endaweni yakho ikhompyuter- usebenzisa iakhawunti esele i-HWID ivaliwe kwixesha elidlulileyo kwikhompyuter eyonakeleyo isenokukhokelela kwimicimbi ukuba awukho ngononophelo.
Iikhompyuter ziya kukuxabisa amawaka eedola, ke kutheni uzikhathaza ngayo yonke loo nto xa unokuthembela kwinkonzo yethu ye-HWID Spoofing yokukubuyisela emdlalweni? Ukuhlala nesiphumo sokuvalwa akusengokwenyani yakho, njengoko unokuhlala ukopela "ukufa komdlalo" usebenzisa iHWID Spoofer yethu.
Ngaba ndiza kuvalwa kwakhona?
Ukufumana ukuvalwa kwe-HWID kusenokwenzeka ukuba sisiphumo sokugenca ngendlela ecacileyo, okanye nokuba usebenzisa ubuqhetseba obungahambelaniyo nezo uya kuzifumana kwi-GamePron. Eyona ndlela ilula yokuphepha ukuthintelwa kwasekuqaleni kukusebenzisa ukukopela okuphezulu kumboneleli onokuthenjwa, ekuphela kwento oya kuyifumana apha! I-GamePron yakhe ishishini ngokusekwe kwigama lethu le-stellar, okuthetha ukuba zonke izinto zokukhohlisa ezifumaneka kwiwebhusayithi yethu ziya kukusebenzela kakuhle. Ayisiyiyo kuphela i-100% yethu engafumanekiyo, kodwa ukuba ngasizathu sithile ugqibe ukuvalwa umlomo, ungabuyela kwi-HWID Spoofer yethu uphinde uyenze kwakhona!
Ingaba sisangqa esikhohlakeleyo ngamanye amaxesha, njengoko ukuthintela ukuvalwa kungangumsebenzi onzima nabanye ababoneleli. Ayisekho imeko xa ubhalisela i-GamePron, njengoko uya kuba nakho ukufikelela kuzo zonke izinto ezilungileyo (kwaye zikhuselekile!) Kwi-Intanethi, kunye ne-HWID Spoofer ekhokelayo. Yeyona nto ibalaseleyo kwihlabathi liphela xa usiba lilungu leMidlaloPron, ke ulinde ntoni?
Yeyiphi imidlalo endinokuyisebenzisa kwi-HWID Spoofer?
I-HWID Spoofer inokusetyenziselwa yonke imidlalo oyithandayo, njengoko ingagcinelwanga nasiphi na isihloko esithile. Ukuvalwa kwe-HWID akunanto yakwenza nemidlalo ngokwazo, nangona inokukuthintela ekufumaneni eminye. Ukuvalwa kwe-HWID kuzothatha ixesha kude kube kujongwana nako, kuthintela ukuba ungene kwiakhawunti yakho evaliweyo de izinto zilungiswe; Umdlalo owenqatshelwe kuwo awunamsebenzi. Ngethuba nje unako ukuphazamisa i-HWID yakho kwaye wenze iiseva zibonakala ngathi udlala kumatshini ohlukileyo, akukho thuba lokumisa!
Oku kufanelekile xa ujonge ukulungiswa kwakho, kodwa ukuvalwa kwe-HWID kuyakuthintela ekwenzeni oko. Sukuzama kwaye ufumane umdlalo okhethekileyo we-HWID Spoofer, njengoko kungekho nto injalo! Nokuba ungowuphi umdlalo okhangela ukuwudlala kwakhona, ungasebenzisa i-GamePron kunye neHWID Spoofer yethu ukuze usebenze ngendlela ejikeleze ukuvalwa kwe-HWID ngokuzithemba.
Ndingayisebenzisa ixesha elingakanani i-GamePron HWID Spoofer?
Sivumela abasebenzisi bethu ukuba bafumane ukufikelela okoko banokuthanda kuba sineephakeji ezimbalwa ezahlukeneyo ezikhoyo kumalungu eMidlaloPron. Ixesha olinikiweyo lokufikelela kwi-HWID Spoofer limiselwe kwinqanaba lobulungu bakho, yiyo loo nto singasoloko sicebisa abo baxhaphaza rhoqo ukuba baqwalasele ukusayina i-VIP. Ayizukufumana ixesha elongeziweyo lokusebenzisa iihacks zethu, kodwa zikhona nezinye izibonelelo (njengeHWID Spoofer!) Ukuqwalaselwa ngokunjalo.
Siza kuhlala sicebisa ukuba abasebenzisi baqwalasele ukusebenzisa i-HWID Spoofer ngaphambi kokuba bavinjelwe kwasekuqaleni, kuba oko kuyakuthintela i-ID yabo yentsimbi ukuba ingavinjelwa ngelixa kugqogqwa. Iphantse yaquka umlinganiso owongezelelweyo wokhuseleko kwi-rig yakho yokudlala!
Onyuliweyo wethu IHwid Spoofers
I-Hwid Spoofer, ungavunyelwanga, Susa ukuvalwa kwe-Hwid, i-ID ye-Hardware
Kuhle UHwid Spoofer Iimbonakalo